Home Wararka Doc Wareenka Barlamanka ay ku Hayaan Xaliima Yarey iyo Gudiga GMDQ Maxaa...
Doc Wareenka Barlamanka ay ku Hayaan Xaliima Yarey iyo Gudiga GMDQ Maxaa looga Dan Leeyahay -Akhriso.
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta markale ka doodaya hindise sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka.
Akhrinta 2aad ee Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka ayaa ah mid weli ay Xildhibaannada Golaha ka doodayaan.
Qaar ka mid ah Xildhibaannada Golaha shacabka ayaa kulakii shalay fikradahooda ka dhiibtay Akhrinta 2aad ee hindise Sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka oo maalmahan ay mudanayaasha si adag uga doodayeen Xildhibaannada.Waa dood xoog badan oo u wanaagsan shacbiga waxaana fileynaa inay xubnaha Ilaahey uga cabsadaan waxa ay umadda u doorayaan, ogaadaanna in xaaladda lagu jiraa xumaan iyo samaan ay iyagu leeyihiin mas’uuliyadeeda.
Laakiin Waxaa la y aa bleh in Guddiga doorashoyinka ay wadaan waxa loo yaqaanno Workshops ama doodwadaag ay qabanayaaan, kasoo saabsan hababka doorasho ee jira. Sharcigii kama soo dhamaan Barlamanka sidee sayey u qaban karaan dood wadaag ku aadan sharci aan wali soo dhamaan iyo kala doorashadii hannaanka uu barlamanka ka gudbay doortayna hanaanka First-Past-the-Post?
Bartooda twitterka ay ku soo qoreen waxey qabteen dood wadaag ku saabsan sharciga doorashooyinka oo ay ayagu soo qabanqaabiyeen proportional Representation, iyadoo Golaha shacbiga uu ka doodayaa habka loo yaqaanno First–past-the-post (FPTP) ama loo yaqaanno simple Majority oo ah waliba hab ka sahlan kan ay guddiga, Xaliima Yarey iyo Villa Somaliyaba la ordayaan.
Nidaamkan FPTP cod-bixiyuhu wuxuu hal cod oo keliya u dhiibanayaa qofka ay doorteen. Musharaxa hela codadka ugu badan ayaa la doortaa. Waa hanaan fudud oo loogu talagalay oo aan Tashwiish Badan lahayn.
Balsé waa maxay Danta ay Xaliima Yarey iyo Guddiga ka leeyihiin arrintaa?
Waa docwareemid iyo marin habaabin tashwiish leh oo ay mudanayaasha iyo shacbiga la gelinayao. Waayo Barlamanka waxaa uu ka doodayaa maaha ahan habkaan doorasho ee Proportional Representation(PP) ee rabaan Farmjo iyo Kooxdiisa.
Madaxweyne Farmajo iyo Villa Somaliya oo u arkayey in habkaan FPTP uu fudud yahay waxna aan la isku dabamarin Karin oo awoodda oo dhan uu keeyahay codeeyaha oo noqon kara Xildhibaan ama cid kale oo agu heshiiyey.
MW Farmajo iyo Xaliima yarey oo isku afgartay in lagu noqdo habkaas Proportional Represtation-ka (PP) oo kan barlamanka uu wadaa ee FPTP la tashwiishiyo, lana docwareemo.
Guddiga oo raba inay kharash iyo wax xoogaa lacag ah u isticmaalaan si wax looga helo, kuwaas oo qabashada Doodadaagga (Workashops) ay sharciyeyneyso in kharash la gali karo si lacag loo soo fasaxo.
Waxaasa ugu muhiimsan Villada oo aad ugu adkeysaneyso in loo noqdo habka PP oo ay u arkaan inuu hiillinayo in wax la is dabamariyo.
Haddaba waxaa la isweydiinayaa GMDQ ma qaban karaan doodwadaag sharcigii oo aan wali soo dhamaan? Awooddaas guddiga ma leeyahaysa?
Ugu damabeyn Gudoomiyaha GMDQ iyo Xubanaha guddigaba waxaa saaran xil weyn oo ah inay qabtaan doorasho xalaal ah intii karaankooda ah oo ay masuliyadda iyagu qaataan kana fogaadaan wixii keeni kara in Xisbiyada ama shakhsiyaadka ku tartamayaa aysan u sameyn qiil cad oo ay ku diidi karaa ka qeybgalka ama Natiijada doorashada.